ဆုံးရှုံးသွားသောလေပြေ: Broken ခေတ်ထဲမှာတစ်ဦးကဝမ်းနည်းပုံပြင် | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ဆုံးရှုံးသွားသောလေပြေ: Broken ခေတ်ထဲမှာတစ်ဦးကဝမ်းနည်းပုံပြင်
ဆုံးရှုံးသွားသောလေပြေ: Broken ခေတ် APK ကိုတစ်ဝမ်းနည်းပုံပြင်
ပျောက်ဆုံးသွားခရီးလူ့သဘောသဘာဝ, ဆငျးရဲဒုက်ခယဇျပူဇျောအကြောင်းပုံပြင်ကိုအခြေခံပြီးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျယောနနှင့်အတူစွန့်စားမှုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ ထွက်လမ်းကိုရှာပါနှင့်ပဟေဠိဖြေရှင်းရန်။ သငျသညျပုံပြင်နှင့်ပဟေဠိဂိမ်းတစ်ခုပန်ကာမှန်လျှင်, သင်ယောနသည်ဤအသက်တာ၏လျှို့ဝှက်ချက်တူညီမှုများပျက်စီးဖို့ကူညီပေးပါဒီ game.Can ကြည့်ဖို့ပျော်ရွှင်ဖြစ်လိမ့်မယ်?
သူကအမှုအရာသတိရနိုင်မီ Unluck ယောနသည်သူ၏မိဘဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သူကတခြားမိဘမဲ့နဲ့အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦးချိုင့်၌နေထိုင်ခဲ့တယ်။ သူတို့ဟာတူညီတဲ့အသက်အရွယ်မှာရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာငြိမ်းချမ်းစွာဘဝအသက်ရှင်။ , သူတို့ကသူတို့ရဲ့သေးငယ်တဲ့ကမ်ဘာပျေါတှငျနထေိုငျနှင့် outside.Life ကနေအထီးကျန်ဖှယျဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့တကယ်ကဤထိမိခဲ့ပါဘူး။ သူကလူ့သဘောသဘာဝနှင့် darkside အကြောင်းကိုဘာမျှသိတယ်ပေမယ့်ယောနပြင်ပကမ္ဘာတွင်အကြောင်းကိုစပ်စုသည်။
တစ်နေ့မှာလေသည်ပျြောရှငျသောမွို့ "Loondon" ပျော်ရွှင်မှုကိုတစ်ဦးပွဲတော်အတွက်အခမ်းအနားလည်းမရှိထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့ Jonah, တစ်ပိုစတာမှုတ်။ ယောနစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့သည်။ သူကသူ့မိတ်ဆွေများနှုတ်ဆက်ဟုတစ်ယောက်တည်းခရီးကိုစတင်ပါ။ သူနှင့် ပတ်သက်. ဘာမျှမသိတယ်သော machinarium မှ ...
အဆုံးမှာသူကလန်ဒန်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အရာအားလုံးကျိုးပဲ့လူတိုင်းအသံတိတ် keeped, အိုးမဲ့အိမ်မဲ့လူပေါင်းထူးထူးခြားခြားပင်တစ်စုံတစ်ဦးကမှထွက်ရရန်သူ့ကိုအော်သူ့ကိုကြည့်ရှု။ 13 ၏အသက်အရွယ်မှာဆိုးညစ်ယုတ်မာတဲ့အခွအေနေရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင် Jonah နိုင်မလား အဘယ်သူသည်မိမိအအသက်သွေးကြောကိုင်ထားသလဲ? သူတို့ကိုလည်းဘေးဒဏ်ခံရသော minions ထံမှလွတ်မြောက်ရန်, ဒါမှမဟုတ်မြေကြီးပေါ်ရှိနောက်ဆုံးသောနေ့၌အသက်ရှင်နိုင်သလော
- Gothic အဘိဓါန်ဂရပ်ဖစ်များနှင့်ထိထိမိမိဂီတ
- အခမဲ့ Indie ဂိမ်း
- ပြီးစီးအချိန်: 30-60 မိနစ်။
ဆုံးရှုံးသွားသောလေပြေ: Broken ခေတ်ထဲမှာတစ်ဦးကဝမ်းနည်းပုံပြင်